Ahoana no fiantraikan 'ny votoatin'ny pejy SEO?
Tamin'ny taona 2017, ny fahombiazan'ilay tranonkala dia voafaritra voalohany amin'ny votoatiny. Noho izany dia tena irariana ny hameno ny votoatin'ny tranonkala amin'ny kalitao sy ny votoatin'ny SEO, na ny lahatsoratra, ny bilaogy, ny taratasy fotsy, ny fianarana tranga, na e-boky na horonan-tsary manazava.Ny zava-misy dia satria raha tsy manome votoaty miavaka sy tsara tarehy ny tranonkalanao, ny mpitsidika dia handao ilay tranonkala ary hitady ny iray hafa izay manome ny votoatiny, ny votoaty voalohany hitady azy. Izany no mahatonga ny fanatsarana ny SEO ao amin'ny pejy. Androany dia holazaiko aminao hoe ahoana no ahafahanao manao izany fa tsy mandany vola be loatra. Na izany aza, andeha aloha hojerentsika hoe inona marina ny pejy.
Pejy Content Definition
Ny votoatin'ny pejy dia manondro ny angon-drakitra rehetra ao anaty tranokala. Ny votoatin'ny pejy dia azo aseho amin'ny endrika, rohy, sary, feo, animation, na horonan-tsary. Satria ny Google sy ny fitaovam-pikarohana hafa dia manana fahaizana voafetra hahafantarana sary, animation, horonan-tsary, ary feo, zava-dehibe ny hampiasanao ny anaran-drakitra na ny toetra mahazatra hanoritsoritana ny votoaty toy izany.
Fomba fitohizan'ny fanatsarana ny votoatin'ny pejy ho an'ny SEO
Ny votoatin'ny pejy dia ny fahitan'ireo mpampiasa anao. Ireto misy dingana tsotra tokony harahinao hanatsarana ny votoatin'ny SEO:
Fidio ny teny fanalahidy mety
Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia mamintina ny setrin'ny teny fanalahidy ho an'ny olona mpividy anao sy fandraisana an-tserasera. Eritrereto ireo fehezan-teny manan-danja izay mety ho mpanjifanao mety hiditra ao anaty boaty fikarohana Google raha mitady tolotra na vokatra azonao.
Ny anaran'ny sehatra tsara dia singa iray manan-danja ao amin'ny tetikasanao SEO pejy. Rehefa misafidy ny anaranao anaran-toerana, dia ataovy azo antoka fa maneho ny momba ny tranonkala. Hazòny ho tsotra sy tsotra izany. Ny fametrahana teny fanalahidy ho an'ny anaranao eo amin'ny sehatra dia hevitra tsara ihany koa.
Manoro hevitra ny manam-pahaizana SEO hanatsara ny pejy tsirairay ao amin'ny loharano. Mifantoha amin'ny fametrahana ny pejin'ny findainao bebe kokoa finday amin'ny alalan'ny fampiasana metadata sy votoaty. Rehefa mamorona ny lahatahirinao ianao, dia ataovy antoka fa tsy teny 8 na tarehimarika 70 izy ireo.
Fifanakalozam-baovao sy manan-danja
Ny tanjonao dia ny hamoronana votoatiny mahaliana sy mahaliana izay te-hamaky sy hizara. Tadidio fa ny votoatin'ny pejyo dia mamaritra ny maha-sarobidy ny tranonkalanao ho an'ireo izay mikaroka mandritra ny fikarohana.
Mamorona pejy fandraisana izay manokana ho an'ny serivisinao sy ny teny fanalahidy dia tsy mahasoa afa-tsy amin'ireo milina karoka ho an'ny mpihaino anao koa. Koa satria pejy manokana momba ny fitsinjaram-pahefana no mifanaraka amin'ny vokatra na serivisy manokana, dia mety ho tsara izany raha misafidy teny fanalahidy mahasoa ianao ary ampidiriny ao amin'ny lohatenin'ny meta sy ny famaritana.
Ireto ny teknolojia SEO ao amin'ny pejy azonao ampiasaina sy hampiharina avy hatrany mba hanatsarana ny tranokalanao amin'ny fametrahana tsaratsara kokoa amin'ny Google.Na dia mety handany fotoana be aza ny dingana voalohany, dia mety ho sarobidy ny fandaniana sy ny habetsaky ny fifamoivoizana azonao atolotra ho an'ny loharano Source .